ဘာဆာ ရဲ့ ဟာလန်း အစားထိုးပစ်မှတ် ၊ နံပါတ် ၁ ဖြစ်လာတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ရပ်ဆိုင်းပြန်တဲ့ စပွန်ဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဘာဆာ ရဲ့ ဟာလန်း အစားထိုးပစ်မှတ် ၊ နံပါတ် ၁ ဖြစ်လာတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ရပ်ဆိုင်းပြန်တဲ့ စပွန်ဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ လီဗာပူး ဟာ ဘရိုက်တန် အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၂-၀ နဲ့ အနိုင် ရပြီး မန်စီးတီး နဲ့ ၃ မှတ် အကွာကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ စပါး ကို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ဟက်ထရစ် ကြောင့် ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး အဆင့် ၄ နေရာကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါတယ် ။
အခြားပွဲစဉ် မှာတော့ ဘရန့်ဖိုဒ့် က ဘန်လေ အသင်းကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ရိုနယ်ဒို ဟာ ယမန်နေ့ညက သွင်းဂိုးတွေကြောင့် ၈၀၆ ဂိုးနဲ့ ဂျိုဆပ် ဘီကန် ကို ကျော်လွန်ကာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမိုင်းမှာ ဂိုးသွင်း အများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ အဆင့် ၁ နေရာက အေစီမီလန် ဟာ အမ်ပိုလီ အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ဟာ ဒေါ့မွန် တိုက်စစ်မှူးလေး အာလင်း ဟာလန်း ကို လာမယ့် နွေရာသီမှာ ခေါ်ယူဖို့ နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
စီးတီး ဟာ ဟာလန်း ရဲ့ ပေါင် ၆၃ သန်း စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ကို ပေးချေ မှာ ဖြစ်ပြီး လက်မှတ် ထိုးခ ၊ အေးဂျင့်ကြေး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ပေါင် သန်း ၁၀၀ ကျော် ကုန်ကျ နိုင်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ အာလင်းဟာလန်း ကို မခေါ်ယူ နိုင်ပါက ဘိုင်ယန် နဲ့ စာချုပ် ကုန်ဆုံးတော့မယ့် ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ခေါ်ယူ သွားဖို့ ပြင်ဆင် နေပြီလို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် အော်တိုမိုးတစ် ထုတ်လုပ်သူ Hyundai ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းနဲ့ လက်တွဲမှု ကို ရပ်ဆိုင်း ထားလိုက်ပြီလို့ ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး အာရီဂို ဆက်ချီ က ဒွန်နာရမ်မာ ဟာ PSG ကို ငွေမျက်နှာ ကြည့်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ဒီလို ရွေးချယ်မှုဟာ မှားယွင်းခဲ့ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းဟာ လာမယ့် နွေရာသီမှာ အသင်းကို နောက်တကြိမ် ငွေအင်အား အသုံးပြုပြီး အားဖြည့်ဖို့ စီစဉ် ထားကာ လိဒ်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ကယ်လ်ဗင် ဖိလစ် နဲ့ ချဲလ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ရှိနေတဲ့ ခံစစ်မှူး ရူဒီဂါ တို့ကို ချိန်ရွယ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီယို ဖာဒီနန် ကတော့ ချဲလ်ဆီး အပေါ် ဆန်ရှင် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဟာ ပိုင်ရှင် ရိုမန် အပေါ် ချမှတ်တယ် ဆိုတဲ့ ဘောင်ကို ကျော်လွန် သွားပြီး အသင်းကို ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်သလို ဖြစ်နေပြီလိ့ု ဝေဖန် ထောက်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဖာဒီနန် က နွေရာသီမှာ ချဲလ်ဆီး ကစားသမား အများအပြား အသင်းပြောင်းနိုင်ကြောင်းလည်း သုံးသပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အကြီးအကဲဟောင်း မာတင် ဘရော့တန် ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းို ဝယ်ယူဖို့ အတွက် စကားပြောဆို နေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ ရဲ့ ကာယ လေ့ကျင့်သူ က ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူဟာ နွေရာသီ မှာ အသင်းသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ လိမ့်မယ်လို့ အရိပ်မြွက် ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘောလုံး တင်ဆက် သုံးသပ်သူ အဖြစ် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ပေါလ်မာဆင် က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ပိုချက်တီနို ကို ခေါ်ယူဖို့ အစီအစဉ် ကို ပြန်လည် စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ၊ ပိုချက်တီနို ဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ဥရောပ မှာ အောင်မြင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ဟာ စပါး နဲ့ ပွဲကို အဖျားဝေဒနာကြောင့် လွဲချော် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ် ဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ် နေကာ ကြားရက်မှာ ကစားမယ့် အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ ပွဲကို လည်း လွဲချော်ဖို့ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ဒါရိုက်တာ ဖာဘီယို ပါရာတစ်ချီ ကို ချဉ်းကပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေပြီး လက်ရှိ ဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒို ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူး အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ကို လာမယ့် နွေရာသီမှာ ပြန်လည် ရောင်းထုတ် သွားဖို့ စဉ်းစားနေပြီလို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
Previous Article ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေဟာ လီဗာပူးစတားကို ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့ ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲအပြီးမှာ ပြောသွားခဲ့တဲ့ ရောဘတ်ဆန်
Next Article ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုး 2000 ပြည့်မြောက်သွားတဲ့ လီဗာပူး